Shirkadda Isgaarsiinta GOLIS Oo Adeegga TAAJ kusoo Bandhigtay Magaaladda Garoowe[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shirkadda Isgaarsiinta GOLIS Oo Adeegga TAAJ kusoo Bandhigtay Magaaladda Garoowe[Sawirro]
Shirkadda Isgaarsiinta Golis ayaa kusoo bandhigtay magaaladda Garoowe kusoo bandhigtay Adeegyo cusub oo u kamid yahay Adeegga TAAJ oo ah mid lacagaha dibada iyo dalka si toos ah moobilkooda loogu soo dirayo.
Xafladda ballaaran oo Adeegyadan cusub lagu soo bandhigay oo lagu qabtay Jaamacada Bariga afrika ayaa waxaa ka qeybgalay Madaxda shirkadda,maamulka gobolka,Culuma’udiin,ganacsato iyo marti sharaf kale.
Madaxa Shirkadda Golis Garoowe Maxamuud Ismaaciil AW Cismaan oo ka hadlay adeegga TAAJ ayaa sheegay adeegyadan iney shirkadu dadaal dheeri ah u gartay.
Wuxuu sheegay in Adeeggan TAAJ uu yahay adeega isku xiraya moobilka u furanyahay Adeega SAHAL iyo Akoonka Salaam Bank,sidoo kalena ay Xawaaladu fududeynayso dirista Lacagaha dibada iyo soo dirista Lacagaha.
Hoggaanka Ganacsiga Shirkadda Golis Cumar Ciise Maxamed oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in dhawaan Shirkadda Golis macaamiisheeda u keeneyso adeegyo cusub oo kusoo biiray Tiknoolajiyada caalamka.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdillaahi Ciise Axmed ayaa xusay in wax lagu farxo ay tahay adeegyadan cusub ay soo kordhisay Shirkadda Isgaarsiinta Golis ,isagoona sheegay in shirkadu ka qeybqaadato horumarka bulshada.
Xafladda ayaa inta ay socotay ,waxaa lagu qabtay goobta bakhtiya-nasiib lagu helaayey Laptop Computer,Mobile Glaxy,Camera iyo Prepaid Card Golis ah,waxaana si weyn loo ammaanay Golis.
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Federaalka oo kulan wadatashi ah la yeelatay Dhalinyarada[Sawirro]
Madaxweyne Muuse Biixi: Inaan Cabdiweli Gaas la hadlo faragalin baan u arkaa
Madaxweyne FarmaajiIyo Wafti uu hoggaaminayo oo gaaray degmada Balanballe ee Galgaduud
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Muqdisho ku soo dhaweeyay Maxaabiis laga soo daayay dalka Hindiya[Sawirro]